सुन्दै अचम्म ! १२ बर्षीय विद्यार्थीबाट ३४ बर्षीया शिक्षिका गर्भवती «
सुन्दै अचम्म ! १२ बर्षीय विद्यार्थीबाट ३४ बर्षीया शिक्षिका गर्भवती
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७५, आईतवार १६:४०
काठमाडौं, ७ असोज । संसारमा अनौठा अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । सुन्दै पनि अचम्मै लाग्ने घटना अमेरिकामा भएको छ ।अमेरिकाका एक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षिबीचमा प्रेम चल्छ । प्रेम चलिरहँदा १२ वर्षीय एक बालकले ३४ वर्षकी शिक्षिकालाई गर्भवती बनाउँछन् । यो घटना अहिले भर्खरैको भने होइन । सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको हो । त्यस समय अमेरिकामा ती शिक्षिका निकै चर्चामा थिइन् । छोरा भन्न सुहाउने १२ वर्षीय बालकबाट गर्भवती भन्ने ३४ वर्षकी ती महिलाको नाम मेरी हो । उनी एक विद्यालयमा पढाउँथिन् । उनले पढाउने स्कूलमा एकजना १२ वर्षीय छात्रले पनि पढ्ने गर्थे ।
ती बालकको नाम विली हो । मेरी र विलीबीच यतिधेरै सामीप्यता कायम भयो कि उनीहरु एकअर्काको प्रेममा परे । उनीहरुबीच यौन सम्पर्क पनि भएछ । झण्डै एक वर्षसम्मको शारीरिक सम्पर्कमा रहेका उनीहरुका विषयमा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । उनीहरुको सम्बन्ध अवैध थियो । त्यसैले नाबालिगसँग अवैध सम्बन्ध कायम गरेको आरोपमा मेरीलाई पुलिसले पक्राउ गर्यो । मेरीलाई जेल सजाय पनि भयो । तर जेलमा अनौठो घटना भयो । मेरीले जेलभित्रै बच्चा जन्माइन् । वास्तवमा उनको पेटमा विलीसँगको यौनसम्पर्कबाट बच्चा हुर्किरहेको थियो ।
बच्चा जन्मिएपछि उनलाई जेलमुक्त गरियो निगरानीमा रहने गरी । तर जेलमुक्त गर्ने बेलामा अदालतले उनलाई शख्त आदेश दिएको थियो, प्रेमी विलीसँग कहिल्यै पनि भेट गर्न नपाउने । अदालतको त्यस्तो आदेशका बावजूद जेलबाट निस्किनेबित्तिकै विलीले अदालतको आदेशको खिल्ली उडाउन थालिन् । उनी एकपटक विलीसँग कारभित्र आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको बेला फेरि पक्राउ परिन् । त्यसपछि उनलाई सात वर्षको जेल सजाय भयो । यसमा रोचक कुरा त के भने त्यो बीचमा उनी फेरि गर्भवती भएकी थिइन् । उनले जेलमै दोस्रो बच्चा जन्माइन् । यसपटक भने उनलाई पूरै ७ वर्षको सजाय काटेपछि मात्र जेलमुक्त गरियो । सन् २००४ मा जेलमुक्त भएसँगै मेरी पुनः विलीसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालिन् ।
जब विलीको उमेर २० वर्षको भयो र कानूनी रुपमा विहेका लागि योग्य बने तब विली र मेरीबीच वैधानिक रुपमा बिहे भयो । त्यतिबेला मेरी चाहिँ ४२ वर्षकी थिइन् । बिहेअघि नै उनीहरुका दुईवटा बच्चा जन्मिसकेका थिए । मेरी जेलमा रहेको बेला विलीकी आमाले ती दुबै बच्चाको हेरचाह गरेकी थिइन् । बिहेपछि मेरीले थप दुई सन्तान जन्माएकी थिइन् । अहिले मेरी र विली आफ्नो पूरै परिवारसहित वाशिङ्टनमा बस्दै आएका छन् । एक अन्तर्वार्तामा विली र मेरीले आफ्नोजस्तै स्थितिमा नफस्न आफ्ना बच्चाहरुलाई सचेत गराएका थिए । एजेन्सी